July 2021 – Candle Myanmar
ဖေ့ဘွတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ညှစ်နေလား? စိတ်ညှစ်တာတွေ ပြေစေဖို့ အတွက်…..
ဖေ့ဘွတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ညှစ်နေလား? စိတ်ညှစ်တာတွေ ပြေစေဖို့ အတွက်….. ချင်းတိုင်းရင်းသား တယောက်ရဲ့ အနုပညာလေး အားပေးကြပါအူး 1) 2) 3) 4)5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
အကျဉ်းသား ငါးထောင်ကျော်အတွက် ICRC ကို CRPH ကအချက် ၇ချက် စာပို့တောင်းဆို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ၊ ICRC(Myanmar)ထံကို ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ကနိုင်ငံအတွင်း က ထောင်အသီးသီးမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ငါးထောင်ကျော်ရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးနေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နိုင် ငံတကာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီ အမြန်ဆုံး အ ကောင်အထည်ဖေါ်ပေးသွားဖို့ ဒီကနေ့မှာပဲ စာပို့ပြီး တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီတောင်းဆိုချက်မှာ အချက် ၇ ချက်ပါဝင်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ